Gowwaan tokko tokko ammas kan dubbiin hin galiniif Oromootu biyya bulchaa jedha – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosGowwaan tokko tokko ammas kan dubbiin hin galiniif Oromootu biyya bulchaa jedha
Badhaadhinna waliin fuldurri kenya namni 450 ol dhumuudha
Ijoollee tennaa baqaan biyya yaman keessatti lubbuun isaanii darban warra jannataa haa godhu maatiifi firoottan isaaniif jajjabina hawwa
Jibbaminsi Abiy ahmad addunyaa irratti jibbamuu qofaa miti ijoollee qacalee kenyas nu jalaa fudhataa jira.
Dr Milkeessaa Miidhaga
OMN: Gabaasa Addaa Ajjeechaa Suukanneessaa Biyya Yamanitti Baqattoota irratti raawwatame
Abiy nama kolfaatu MM tahe. Ajaa’iba isaa dubbachuun na hifachiise:)
“Guyyaatti namuu barruu fuula tokko —waan arge, waan dhagaye, oolmaa keessa oolu yoo barreesse waggaatti fuula 365 taha. Akkasitti waggaatti kitaaba tokko barreessuu danda’a” jedhe.
Tole egaa: biyya keessaa baay’ee tahuu baatus biyya alaa kanatti namuu yaadannoo (diary) guyyaa hunda waa irratti barreessu qaba. Hundinuu kitaabatti jijjiirtanii akka maxxansitan MM Abiy waamicha isiniif dhiheessee jira. Hiikkaan kitaabaa Abiy biratti kana. Akkuma daabbootti ganamuu kitaabni kumaatama omishamuu qaba akka ergaa Abiyyitti.
Kitaaba godhee maxxansus waanuma haasawaa oolu kanuma argattu; sammuu biraa keessaa yoo bahe malee. Kitaabni abbaa fakkaata. Yoo beekan barreese beekkumsa irraa argatta. Yoo wallaalaan barreesse doofummaa keessaa argatta.
Abiy garuu waggaa 1 keessatti kitaaba 2 afaan 2n barreesse jedhama. Kuni kan tahuu dandayu hojii biraa dhiisee isuma barreessaa jira. Yookaan namatu barreesseef. Lakki yeroo ni qaba kan jettu sababa tarreessi. An garuu kitaaba waan argan guyyaatti fuula 1 barreessan hin dubbisu. Kan saayintistootni qorannaa umrii guutuu itti dabarsanii kitaaba qopheessanuu dubbisee waliin gahuu hin danda’u.
Oduu Waraana Tigraay fi Sudaan Update
Waraanni Tigraay, TPLF waraana koloneel Abiyyi Ahmadiifi shaabiyaa 640 ajjeesee 2,100 ol madeessuun meeshaalee garaa garaa barbaadessuu ibse. Bakkeewwan Abbiy Addii, Timbeenii fi Raamaa keessatti waraanni RIB baayyeen dhumatee jira. Sudaanis karaa magaalaa Qalabat jedhamee beekamuun meeshaa gara daangaatti dhiyaachaa fi seenaa ture tohachuu beeksiste.
Kan Cundhuuraa gaduma